Andiany Voalohany Amin’ny Fetibe (FABY) Iraisan’ireo Afrikana Mpanoratra Bilaogy Sy Mpikirakira Youtube Ao Dakar, Senegaly · Global Voices teny Malagasy
Andiany Voalohany Amin'ny Fetibe (FABY) Iraisan'ireo Afrikana Mpanoratra Bilaogy Sy Mpikirakira Youtube Ao Dakar, Senegaly
Voadika ny 08 Jona 2016 8:01 GMT
Vakio amin'ny teny English, Swahili, Español, Ελληνικά, Français
Afisin'ny fetibe FABY iraisan'ireo Afrikana mpanoratra bilaogy sy mpikirakira Youtube, avy amin'i Armelle, nahazoana alàlana
Manao tombana ao amin'ny bilaoginy ny andiany voalohany tamin'ny Fetibe (FABY) iraisan'ireo Afrikana mpanoratra bilaogy sy mpikirakira Youtube, natao ny 3 hatramin'ny 5 Jona 2016 tao amin'ny kianjan'ny Fahatsiarovana tao Dakar, Senegaly i Armelle Nina Sitchoma avy ao Kamerona:
Nandritry ny roa andro, andianà bilaogera sy mpikirakira Youtube 36 avy aty Afrika, niaraka tamin'ireo mpisehatra erantany nofantenana avy amin'ny tontolo dizitaly Afrikàna, no nampiseho ny talentany sy ny fahaizamanaon'izy ireo mba hampahafantarana ny vahoaka Afrikàna sy izao tontolo izao momba ireo votoatin'ny dizitaly afrikàna, ny mety ho asa azo atao avy aminy, ny fiarahamiasa sy ny lalàm-barotra azon'io tontolo io atolotra azy ireo.
Nizara ho vondrona roa ny fandraisam-pitenenana, toy ny « Big Data : Anjara toerana toa inona ho an'ny votoaty afrikàna ? » narindran'i Aboubacar Sadikh Ndiaye, Consultant web 2.0 sy ny « Ny lahatsary aty Afrika : Manao ahoana ny hoaviny ? » narindran'i Mountaga Cissé avy ao Senegaly no nandravaka ireo andro roa nifanakalozana.
Ireo bilaogera sy mpikirakira Youtube fantadaza no nanentana ny fotoana, toa an'i Edith Brou avy any Côte d’Ivoire, Yassine Massouath avy any Maraoka, Mountaga Cissé avy ao Senegaly, niresaka ny lohahevitra « Ahoana no hahombiazana ao anaty Aterineto? Ny mety ho asa atolotry ny tontolon'ny IT. » Annie Payep avy any Kamerona, Ameyaw avy any Ghana, Alexandre Lette sy NK Thiat avy ao Senegaly no manentana ny atrikasa momba ny « Politika manao ahona mba hahazoana votoaty tsara kalitao ? »
Natokana hiresahana ny hoavin'ny lahatsary ao Afrika ny andro faharoa tamin'ilay fetibe. Tsy maintsy mandalo amin'ny aterineto mikoriana tsara ny fahafahana hisongadina ho hita ao anaty aterineto. Merouane Boudiab avy any Alzeria, El Oumar Diop avy ao Senegaly ary i Aphtal Cissé avy ao Togo no tomponantoka amin'ny resaka « Tetikady manakory mba hisian'ny fifandraisana tonga lafatra ao Afrika ? » Tsara ny mamokatra lahatsary. Fa tsara kokoa ny mahazo vola avy amin'izany. Ahoana no hahazoana vola sy hampiroboroboana ny lahatsarin'ny tena ao amin'ny Youtube? Ny valin'io fanontaniana io no atolotr'i Nancie Mwai avy ao Kenya, Lamine Mbengue ary i Assane Mbengue avy ao Senegaly.
Naseho tamin'ny mpanatrika nandritra io fotoana io ireo ohatry ny fahombiazana tao amin'ny Tanibe Afrikàna, toa an'i Aisha Dème avy ao Agendakar. Ho fotoam-piravoana ihany koa ny FABY, andiany voalohany, amin'ny alàlan'ireo tranoheva natokana ho an'ny ankosotra sy ny lamaody an'i Sylvia Njoki (Kenya), lamaody & hatsaràna an'i Aba avy any Senegaly. Tsy ambaka amin'izany ny hainahandro, ny lalao an-dahatsary, ny fanabeazana ary ny hatsikana.